Filentehan'ny masoandro - Jereo ny toerana tsara indrindra hankafizanao azy | Fitsangatsanganana tanteraka
Te hankafy tsara tarehy ve ianao masoandro? Izy io dia iray amin'ireo tranga voajanahary manaitra indrindra izay tsy maintsy araraotinao foana. Noho io antony io, na dia tsy manara-maso izany aza isika indraindray, dia marina fa misy faritra manatsara ireo toe-javatra ireo, satria ho hita fa fampisehoana mahafinaritra tokoa izany.
Noho izay rehetra tafiditra ao, dia mifantina ny toerana tsara indrindra eto an-tany ary eo no ahitantsika teboka sasantsasany amin'ny firenentsika, izay tsy tokony hohadinointsika koa. Soraty ireto toerana manaraka ireto satria hamela anao hanana fotoana manokana indrindra izy rehetra!
1 Fa maninona no ankamamiana ny masoandro?
2 Ny toerana tsara indrindra eto an-tany hankafizan'ny filentehan'ny masoandro
2.1 Tendrombohitra fuji
2.2 Ny maldives
2.6 Ilay efitra efitra Thar
3 Ireo faritra tsara indrindra hijerena ny filentehan'ny masoandro na ny filentehan'ny masoandro any Espana
3.1 The Mirador de San Nicolás
3.4 Finisterre, filentehan'ny masoandro miavaka
3.5 Phouse Orchilla Lighthouse
3.7 Vedrá io
Fa maninona no ankamamiana ny masoandro?
Iray amin'ireo fotoana miala azy io manao veloma ny andro ary toy izany, nilentika ny masoandro. Noho izany, na dia mihetsika na midina aza ny jirony, dia hamorona tontolo majika noho ny fitambaran'ny loko. Na amin'ny faritry ny lanitra na ety an-tany. Ka ny tselatra famoronana indrindra no hatao. Zavatra tadiavintsika sy ilaintsika hatao mandrakizay. Noho izany, izy io koa dia toerana tantaram-pitiavana sy mahafa-po indrindra. Satria samy hankafy azy io ny tsirairay.
Ny toerana tsara indrindra eto an-tany hankafizan'ny filentehan'ny masoandro
Io no faritra avo indrindra eran'i Japon, ka izany no nahatonga azy io ho iray amin'ireo marika lehibe an'io toerana io. ny volkano Nahazo aingam-panahy ny sanganasa marobe izy ary ahoana no hampihena azy io, izy io koa dia iray amin'ireo faritra izay mampino ny filentehan'ny masoandro. Satria toa miditra amin'ny volkano ny masoandro ary hamorona alokaloka mena toa ny lava.
Miaraka amin'ny toetrandro izay mahalana latsaka ambany kokoa amin'ny 25º, hanana safidy tsara koa isika hankafy ny filentehan'ny masoandro. Ho fanampin'izany, miteny ho azy ireo ny sary, fa ny fampifangaroana ny feo manga miaraka amin'ny loko manga ary ny manaitra tora-pasika, ataovy foana izahay hiatrika ny iray amin'ireo toerana paradisaatika indrindra.
Marina izany Tora-pasika Santa Monica mety ho re amintsika izany avy amin'ny andian-tantara na sarimihetsika hafahafa. Fa ny lazany dia mandeha lavitra ary ny filentehan'ny masoandro dia iray amin'ireo fotoana majika indrindra ihany koa. Eo amin'ny sisin'ny seranan-tsambo mihitsy, miaraka amin'ireo zavatra manintona toy ny kodiarana Ferris vigilante, dia hamboarina ny rivo-piainana mihoatra ny manaitra.
Mandeha isika izao mandra-pahatongan'ny Afrika Atsimo afaka miresaka momba ny firenena faharoa be mponina indrindra izay tsy iza fa i Cape Town. Na dia malaza amin'ny faritra seranan-tsambo aza izy io dia any koa no mifandray amin'ny filentehan'ny masoandro. Mandritra ny volana Mey sy Aogositra dia hiditra amin'ny ririnina izy ireo, noho izany dia tsara ny mitsidika azy io amin'ny fahavaratra mba hankafizanao loko mitambatra kokoa.
Eto amin'ity toerana ity dia mitranga kely toa ny Tendrombohitra Fuji ary izany hoe, ny fitambaran'ny filentehan'ny masoandro dia hita taratra ao aminy ary hamorona tontolo misy majika be loatra. Raha amin'ny tenany manokana dia mampino ny toerana miaraka amin'ireo singa Persia, Silamo na Tiorka ankoatry ny hafa, ny lasa alina Manome hatsarana saika tsy hay hazavaina izy io, mila miaina azy fotsiny ianao.
Ilay efitra efitra Thar
Ity toerana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe lehibe ihany koa efitra indiana. Izy io dia faritra somary malalaka izay manomboka amin'ny faritra avaratra andrefan'i India mankany amin'ny faritra atsinanan'i Pakistan. Manana zavamaniry sy faritra be vato izy io. Azonao atao ny mandany ny alina ao, satria misy fitsangatsanganana an'io tanjona io. Araka izany, ho hitanao ny filentehan'ny masoandro mivantana sy mivantana, sady mankafy traikefa tokana.
Toy ny hoe sarimihetsika izany, tsy afaka namita izahay raha tsy niresaka momba an'io park in kenya. Izy io dia faritra savanna arovana izay iainan'ireo karazan-biby rehetra. Noho io antony io dia tonga ao an-tsaina ireo sary mahazatra an'ny tontolon'ny sinema. Fa any lavitra any koa dia hankafizantsika ny veloma ny masoandro mamela antsika sehatra goavambe eo amin'ny faravodilanitra.
Ireo faritra tsara indrindra hijerena ny filentehan'ny masoandro na ny filentehan'ny masoandro any Espana
Mandeha any Granada izahay ary miaraka amin'ny Alhambra Any aoriana dia afaka mahita maso ny masoandro mody manokana isika. Tsy misy fisalasalana fa mandeha foana fa ny miaina azy dia hafa tanteraka amin'ny fomba fitantarantsika azy. Ny fampifangaroana ny loko sy ny fikasihan'ny hatsarana dia mifanindry amin'ny toerana toy izao.
Este valan-javaboary fa any Barcelona isika dia manana iray amin'ireo tombontsoa lehibe. Ankoatry ny fahagagana samirery amin'ireo lamina arkiteky rehetra dia tsy hitsahatra ny hamirapiratra rehefa miposaka ny masoandro. Mahagaga tokoa ny fitambaran'ireo loko izay vavolombelona eo.
Ity iray ity tahiry voajanahary Aragon sy Zaragoza dia iray amin'ireo faritra tandindona indrindra. Io no iray amin'ireo farihy lehibe indrindra any Espana. Na dia tsy manana trondro aza dia mahazatra ny mahita ny fomba vorona miangona ao amin'ilay faritra. Noho izany, izy ireo, ary koa ny toerana sy ny hariva, dia manao fitambarana tena manokana handinihina.
Finisterre, filentehan'ny masoandro miavaka
Ao amin'ny faritanin'i A Coruña. Ao Galicia, mahita faritra tonga lafatra hijerena ny filentehan'ny masoandro isika. Fa ny iray amin'ireo notsidihina indrindra tamin'izany dia ny teboka izay noheverina ho tandrefana indrindra, izay nifaranan'ny tany ka nahatonga ny anarany. Miaraka amin'ny fahitana miavaka amin'ny ranomasina dia tsy ho latsa-danja ilay seho.
Phouse Orchilla Lighthouse
Amin'ity indray mandeha ity dia tonga any Ny vy ary manokana ho an'ny iray amin'ireo faritra notsidihina indrindra hatramin'ny andro taloha. noho izany tsy afa-nandositra ny iray amin'ireo zoro manokana indrindra izy afaka nanao veloma ny andro. Ny ody natsangana dia tsy azo faritana ary mahafinaritra be.
Miresaka zaridaina iray indray izahay, saingy marina fa eo anelanelan'ny fampifangaroana ny honahona ary koa ny fiompiana hita amin'ny toerana toy izany, manasa anao hiala sasatra sy hankafy fotoana tsy manam-paharoa. Tsy mahagaga raha anisan'ny fotoana itadiavan'ny olona manatona azy io.
Izany dia nosy tena akaiky an'i Ibiza ary iray amin'ireo zoro izay tsy hadinontsika. Azonao atao ny mahita azy amin'ny teboka samihafa, satria mankany amin'ny nosy kely ianao dia amin'ny alàlan'ny ranomasina ihany no azonao idirana. Na dia tsy maintsy lazaina aza fa ny hatsarany dia izay zorony akaiky rehetra azonao atao ny mankafy izany fotoana lehibe noresahinay izany. Mbola misy toerana maro hafa hankafizana ny filentehan'ny masoandro any Espana, inona ny anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » masoandro
Inona no ho hita any Japon